Eny, izahay no matihanina fanamboarana, izay manana mihoatra ny 15 taona traikefa amin'ny upvc & aluminium varavarankely fanaovana milina fe-potoana.
Inona no antoka?
1) Ny antoka anay mandritra ny 12 volana.
2) Fanohanana ara-teknika 24 ora amin'ny alàlan'ny mailaka na antso.
3) Tutorial amin'ny boky torolàlana sy horonan-tsary anglisy.
4) Hanome ireo ampahany azo ampiasaina amin'ny vidin'ny maso ivoho izahay.
1) Ho an'ny milina mahazatra, mety ho 3-15 andro izany;
2) Ho an'ny milina tsy manara-penitra sy milina namboarina arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana dia 15 ka hatramin'ny 30 andro izany.
Te hividy milina ho an'ny varavaran-kely aluminium / upvc aho, inona ny soso-kevitra azonao omena?
1) Firy metatra toradroa amin'ny varavarankely sy varavarana no kasaina hamokarana ao anatin'ny iray andro?
2) Inona ny fizarana amin'ny mombamomba anao.
3) Iza amin'ireo varavarana varavarankely no hamokarana?
1) Misy horonan-tsary anglisy na boky torolàlana izay mampianatra anao mampiasa ny masinina.
2) Raha mila izany ianao, ny injenieranay dia hanao ny serivisy fametrahana sy fampiofanana rehefa tonga ny masinina.
3) Manome serivisy amin'ny Internet 365 * 7 * 24 izahay. Izay fanontaniana rehetra, mifandraisa aminay azafady.
Inona ny fitaovana fanampiny?
1) Handefa anao kojakoja mahazatra amin'ny milina izahay
2) Handefa fitaovana maimaimpoana ho anao izahay hanovana anao
3) Hanome ireo ampahany azo ampiasaina amin'ny vidin'ny maso ivoho izahay
Raha ambony noho ny orinasa na orinasa hafa ny vidinao?
Azafady mba zahao, inona ny maha samy hafa ny ampahany amin'ny masinina, ny serivisy ary ny antoka, indrindra ny faritra misy ny herinaratra ao anaty, indraindray, raha misy fahasimban'ny masinina, ny antony lehibe indrindra dia ny olana amin'ny faritra misy ny herinaratra ao anaty, ampiasainay ireo faritra malaza marika eto an-tany apetraho ao anaty masinina, amin'izay azonao antoka fa afaka mampiasa ny masinina mandritra ny taona lava be ianao.
Mino izahay fa hisafidy ny tena milina maharitra maharitra fa tsy milina mora vidy kokoa.
1) Famindrana telegrafika. T / T: fametrahana 30% T / T, fifandanjana sisa 70% alohan'ny fandefasana na mifanohitra amin'ny scanning BL tany am-boalohany. (Raha te-handoa petra-bola kely ny mpanjifa amin'ny voalohany, ohatra, ny mpanjifa sasany te-handoa petra-bola 10%, azo ekena ihany koa izany; raha misy ny mpanjifa mitsidika ny orinasanay ary manamafy ny baiko, te-handoa vola kely toy ny petra-bola, izany koa azo ekena).
Raha mila amin'ny Western Union na Trade Assurance ianao dia tsara ihany koa.
Raha mila tsipika famokarana manontolo ho an'ny varavarankely upvc aho, inona ny milina ilaiko?
Masinina 7 farafaharatsiny, izy ireo dia:
1. Masinina cuttng lohany / tokana
2. Masinina welding
3. Masinina fanodinana / famaranana V
4. Masinina misy volo
5. Masinina loaka
6. Masinina fikosohan-drano amin'ny rano
7. Masinina fanadiovana zoro
Raha mila tsipika famokarana manontolo ho an'ny varavarankely alulminum aho, inona avy ireo masinina ilaiko?
Masinina 5 farafaharatsiny, izy ireo dia:
1. Masinina fanapahana lohany / tokana
2. Faran'ny milina fanodinana
3. Milina fanodinana kopia
4. Masinina mametaka
5. Masinina crimping zoro